Inqubomgomo Yobumfihlo | Martech Zone
Uma udinga olunye ulwazi noma unemibuzo mayelana nenqubomgomo yethu yobumfihlo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Ngo- Martech Zone, ubumfihlo babavakashi bethu bubaluleke kakhulu kithi. Le dokhumenti yenqubomgomo yobumfihlo ichaza izinhlobo zolwazi lomuntu siqu ezamukelwayo futhi ziqoqwe ngu Martech Zone nokuthi isetshenziswa kanjani.
Njengamanye amawebhusayithi amaningi, Martech Zone isebenzisa amafayela we-log. Imininingwane engaphakathi kwamafayela we-log ifaka amakheli e-internet protocol (IP), uhlobo lwesiphequluli, i-Internet Service Provider (ISP), isitembu sosuku / isikhathi, amakhasi akhomba / aphumayo, nenombolo yokuchofoza ukuhlaziya izitayela, ukuphatha isayithi, ukulandelela ukuhamba komsebenzisi ezungeze isayithi, bese uqoqa imininingwane yabantu. Amakheli we-IP, nolunye ulwazi olunjalo aluxhunyanisiwe kunoma yiluphi ulwazi olukhomba mathupha.
Martech Zone isebenzisa amakhukhi ukugcina imininingwane ephathelene nokuthandwa yizivakashi, irekhoda imininingwane eqondene nomsebenzisi ekumakhasi afinyelela kuwo noma avakashelwa ngumsebenzisi, enza ngokwezifiso okuqukethwe kwekhasi leWebhu ngokuya ngohlobo lwesiphequluli sezivakashi noma olunye ulwazi isivakashi esiluthumela ngesiphequluli salo.
I-Google, njengomthengisi ovela eceleni, isebenzisa amakhukhi ukuphaka izikhangiso Martech Zone.
Ukusetshenziswa kwe-Google kukhukhi ye-DART kuyenza ikwazi ukukhangisa izikhangiso kubasebenzisi ngokuya ngokuvakasha kwabo Martech Zone namanye amasayithi akwi-Intanethi.
Abasebenzisi bangakhetha ukungasebenzisi ikhukhi le-DART ngokuvakashela isikhangiso nokuqukethwe kwe-Google inqubomgomo yobumfihlo yenethiwekhi
Abanye babalingani bethu bezokukhangisa bangasebenzisa amakhukhi namabhikhoni ewebhu kusayithi lethu. Abalingani bethu bokukhangisa bahlanganisa iGoogle Adsense, iCommission Junction, i-Clickbank, i-Amazon nezinye izinxusa nabaxhasi.
Martech Zone ayinakho ukufinyelela noma ukuphatha la makhukhi asetshenziswa abakhangisi beqembu lesithathu.
Kufanele uthintane nezinqubomgomo zobumfihlo eziqondene nalezi zinethiwekhi ezivela eceleni ukuze uthole ulwazi oluningiliziwe ngemikhuba yazo kanye nemiyalo yokuthi ungakhetha kanjani ukuphuma kwemikhuba ethile. Martech ZoneInqubomgomo yobumfihlo ayisebenzi, futhi asikwazi ukulawula imisebenzi yabanye abakhangisi noma amawebhusayithi.
Uma ufisa ukuvimbela amakhukhi, ungase wenze kanjalo ngokusebenzisa okukhethwa yakho isiphequluli ngabanye. Ngolwazi oluthe xaxa mayelana nokuphathwa khukhi iziphequluli web ethize zingatholakala at website iziphequluli 'abafanele.